Sare u kaca iyo hoos u dhaca Sanbaloolshe - BBC News Somali
Wuxuu xilligaasi sheegay: "Anigoo af duubaaya dowladda, waxaan jeclaan lahaa in xitaa madaxda sare aysan ka hadlin arrinkaas".
Islamarkii bishii April, 2017kii loo magacaabay agaasimaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA, waxa uu la yimid qorshe loogu magac daray 'Xasilinta Caasimadda', waxaana la dhisay ciidammo isku dhaf ah oo loogu talagalay in ay sugaan amniga caasimadda.
Waxaa Muqdisho laga mamnuucay hubka, iyada oo dadka hubeysan lagu wargaliyay in ay hubkooda dowladda kusoo wareejiyaan, balse wuxuu ahaa go'aan uu ka dhashay buuq badan, loona fasirtay in hub ka dhigis la samaynayo iyada oo aanan la heynin wax damaanad ah oo lagu sugayo amniga dadkii hubka laga qaaday..
Mar la weeydiiyay sababta arrimaha NISA had iyo jeer loogu faaqido saxaafadda ayaa waxa uu sheegay "in NISA ay isugu jirto Sirdoon iyo Amni, wixii sir ahna ay dowladda u qarsanyihiin, wixii amni ahna ay tahay in bulshada ay markasta ka qeybqaadato".
Xil ka qaadis iyo Xil ka tagis
Image caption Sanbaloolshe
Inta hadda lagu xusuusto, Sanbaloolshe labo jeer ayaa xil laga qaaday, labo jeerna isaga ayaa isaga tagay, isaga oo ka doorbiday xilalka cusub ee loo magacaabayay oo kala muhiimsana, balse uusan sii hayn doonin.
Laakiin labada jeer ee uu taliyaha NISA noqday, Sanbaloolshe waa laga qaaday xilka, waxaana xusid mudan in labadaba marba ay golaha wasiirada ka qaadeen xilka.
Xilligii Madaxweyne Xasan Sheekh waxaa loo magacaabay safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga, xilkaas oo uu sugayay wax ka badan 6 bilood ka hor intii aysan dowladda Turkiga ogolaanin in ay safiir ahaan u qaabisho.
Isaga oo safiir ah ayuu dhammaaday waqtigii dowladdii Xasan Sheekh, wuxuuna u tartamay kursi xildhibaan oo doorashadiisa ka dhacday magaalada Jowhar, islamarkaasna uu ku guuleystay kursigii uu u tartamay. Markaas ayuu baneeyay xilkii safiirnimada.
Markii bishii April madaxweyne Farmaajo uu u magacaabay Sanbaloolshe in uu noqdo taliyaha NISA ayaa sida uu sharciga qabo waxa laga codsaday in uu iska dhigo xilka dhildhibaannimada, taas oo uu sameeyay xilli dambe oo ku dhow marka xilka NISA laga qaadi doono.
Balse isaga oo aanan xilka NISA haynin muddo sanad ah ayay golaha wasiirada eryeen bishii Oktoobar, sababaha aad looma faahfaahin.
Sababaha xil ka qaadista
Golaha wasiirada faahfaahin kama aysan bixinin sababta Cabdullaahi Sanbaloolshe xilka looga qaaday, balse waxa ay timid xilli ay suuqa ku jireen warar ku saabsan in "biyaha hoostooda la iska arkay".
Dad badan waxa ay filayeen, ama soo jeediyeen in xilka laga qaado markii ay caddaatay in Itoobiya loo dhiibay "muwaadin Soomaaliyeed" Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, balse taas ma aysan dhicin sabab kasta ha lahaatee.
Xil ka qaadistiisa ayaa timid waxyar ka dib qarixii lagu hoobtay ee Soobe ee 14-kii Oktoobar.
Sanbaloolshe ayaa qorey maqaal dheer oo uu ku dhaliilayo hay'adaha sirdoonka reer galbeedka ee NISA la shaqeeya, waxaana maqaalkaas lagu daabacay wargeyska New York Times.
Haddaba maxay tahay arrinta galaaftay Sanbaloolshe? ma dhiibistii Qalbi Dhagax baa, ma qaraxa Soobe mise tan dambe ee maqaalka New York Times, lama oga.
Turaantaradii ugu dambeysey
Rajadii ugu dambeysay ee uu malaha qabay Sanbaloolshe ee muuqatay waxa ay ahayd in uu dib u hanto xilkiisii xildhibaannimo, taas oo marka ay ugu yartahay uu ku heli lahaa xasaanad buuxda.
Shalay kursigii baarlamaanka ee uu baneeyay ayaa doorashadiisa la qabtay, markale ayuuna tartanka ka qeybgalay, balse markan fursadaha dhankiisa uma janjeerin, waxaana kursiga kaga guuleysto Nuur Iidoow Beyle.
Marka laga hadlayo halbeegga siyaasadda Soomaaliya, Sanbaloolshe hadda banaanka ayuu ka joogaa xeyndaabka siyaasadda, wuxuuna noqonayaa qofkii koowaad ee u muuqda in uu ku qamaaray dowladda hadda jirta, isaga oo si isdaba joog ah u waayay labo xil oo midna loo doortay, midna loo magacaabay - waa kursigii xildhibaan iyo middkii safiirnimo ee uu iska casilay.
Inta hadda la hubo ayaa ah in uu yahay nin saamayn muuqata ku yeeshay labadii dowladeed ee isaga dambeysay dalka, markasta oo loo maleeyo in uu dhacayna, markale haddane dusha soo maraya.
Dad badan waxa ay aad ugu amaaneen gacanta birta ah ee uu ku qabtay amniga caasimadda labadii mar ee loo magacaabay mada NISA, balse si taasi la'eg ayaa loo naqdiyay.
NISA waxyaabaha lagu eedeeyay waxaa ka mid ah in ay qabsanayso shaqooyinkii booliiska, arrintaas oo in badan oo ka mid ah loo tiiriyo Sanbaloolshe.